True Smart 3.5 Touch+ Unlock Firmware ~ သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု
True Smart 3.5 Touch+ Unlock Firmware
Firmwares, True 12 comments
True Smart 3.5 Touch+ Unlock Firmware လေးပါ ။ စမ်းပြီးသားပါ အဆင်ပြေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သူများဒေါင်း နှိင်ပါတယ် ။ PW က familymobile ပါ။
ResearchDownload_Ver6.0.0001 ကို ပါတစ်ခါတည်း Upload လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ResearchDownload_Ver7.0.0001 <<< http://www.mediafire.com/file/lfkg898cuv6rsdi/ResearchDownload_Ver.70.0001.zip >>>
True Smart 3.5 Touch+ Unlock Firmware <<< http://pc.cd/TvHotalK >>>
True Smart 3.5 plus နဲ့ တခြား SPD ဖုန်းများတင်နည်း ###### Vol down + power ဖိနှိပ်ထားး5စက္ကန့်စောင့်ပြီးကြိုးထိုး / ထိုးပြီးတာနဲ့ ပါဝါခလုတ်ကိုလွှတ် Vol down ဆက်ဖိထား အတန်းပြေးပြီးတင်သွားပါလိမ့်မယ်...
chan chan November 25, 2016 at 10:34 PM
True smart 3.5touch unlockရှိရင်တင်ပေးပါသလာ
shan star December 8, 2016 at 10:44 PM
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. နှစ်ရက်လောက် လည်နေတာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ .. အောင်မြင်သထက်အောင်မြင်ပါစေနော်..
new chan December 12, 2016 at 12:43 PM
Mg gyi January 6, 2017 at 1:28 AM
wayphyothu AE January 16, 2017 at 12:46 AM
ကျေးဇူး ဗျို့ မွမွ
zin July 2, 2017 at 10:16 AM
true smart 3.5 touch ကို update လုပ်​လိုက်​တာ လိုင်းမတက်​​တော့ဘူး ဒါ​လေးကိုကူညီပါအုံး
wronglifegirl lay July 4, 2017 at 2:07 PM
wronglifegirl lay July 4, 2017 at 2:08 PM
nay win July 5, 2017 at 12:45 PM
Unknown August 10, 2017 at 3:18 PM
thank you !!!::))))
Pyae Sone August 17, 2017 at 7:46 PM
ဆရာခင်ဗျား ကျတော့်ဖုန်းက logo ဘဲတက်တော့တာ ပြန်တင်လို့အဆင်ပြေမလားဆရာ download ဆွဲပြီးပါပြီ
Sonita Phoneshop March 8, 2018 at 4:36 PM
Help me Please ! Reasearch donwload show me : Failed usercancel! what to do?